> Magan galyo > Daljooga > isku keenista qoysaska
Isku keenista qoysaska
Isku keenista qoysaska (caa’ilooyinka ) kala maqani waxay ku xidhanyihiin aqoonsiga la siiyo ama la siiyey shakhsiyada raba in lookeeno qaybaha kamqan.
Muddada lagu jiro hawsha shakhsiga magangalya doonka ah, looma ogola inuu keeno suwiska, qoyskiisa ama haddey qaybi kamaqantahay qoyskiisa. Haddey eheladiisu kadaba yimaadaan, waa inay iskood uweydiistaan suwiska magangalyo.
Qaxootiga la aqoonsaday
Qaxootiga la aqoonsaday ee haysta charciga B ama C ( permis B ou C ), waxay xaq uleeyihiin isku keenista qoysaska , qaybaha kala maqan oo ah carruurta da’doodu kayartahay siddeed iyo toban sannadood ( - 18 ) iyo waalidiinta. Qoysaska la isku keenayo laguma xidho shuruudo sida : dhaqaale kufilan oo kale. Haddaba si la iskugu keeno qaybaha kala maqan ee qoyska, kuwa jooga suwiska ee loo aqoonsadey qaxooti waa iney qoraan dalab ayku dalbanayaan qaybaha ka maqan qoysaska (caa’ilooyinka ) . dalabkana waxa ladhigaa xafiisyada kaantoonnada uqaabilsan dadka soogaleytiga ah (dadka usoo guuray suwiska ee cusub si ay udagaan )haddaba shakhsigu wuxuu dhigi karaa dalabkiisa xafiiska uqaabilsan soogaleytiga kaantoonka aw dagganyahay.
Dadka lo ogolaado magangalyo ku meelgaadhao
Dadka haysta sharciga F, waxay samayn karaan dalabka qoysaska kala maqan, marka ay haystaan sharcigaasi uguyaraan saddex sannadood ( 3 ans) waxayna dhigayaan dalbashadooda xafiiska uqaabilsan kaantoonka ay daggan yihiin soogaleytiga ( immigration ). Carruurta kamaqani haddey da’doodu kayartahay laba iyo toban sannadood ( -12 ), waalidiintu waxay haystaan waqti gaadhaya shan sannadood si ay usameeyaan dalabka isku keenista. Laakiin haddey carruurta kamqani ka weynyihiin laba iyo toban sannadood (+12), waqtiga waalidku ay haystaan si ay usameeyaan dalabkooda waa laba iyo toban bilood (12 mois).
Waxa shardi ah inay qoysku meel kuwada noolaadaan, loosii diyaariyo guri (hoy) kuwada filan dhammaan dadka la isku keenayo, iyo marka qoysku badnaado, inaaney ubaahan doonin gargaar dhaqaale